Ndị na-eme ihe egwu bụ nnukwu onye na-egwu egwuregwu n'ịntanetị na parkour | Gam akporosis
Ndị na-eme ihe na-adịghị mma bụ onye ọhụụ kachasị nke ọma na-agba agba nke atọ
Smoothdị ire ụtọ nke egwuregwu Rogue Agents ekwe ka ị na-enwe gị online ọtụtụ egwuregwu megide ndị ọzọ egwuregwu. Ọ dị mkpa na egwuregwu nke ụdị a na ekwentị anyị nwere ike zuru oke yana eserese ya na egwuregwu ndị ahụ ọtụtụ oge enwere ọtụtụ egwuregwu n'otu oge.
Ọbụghị naanị nwere nnukwu arụmọrụ, ma site na nkọwa ụfọdụ nke na-eme ka ahụmịhe merie n'ụzọ zuru ezu mgbe agwa anyị nwere ike ịrịgo ụfọdụ mgbidi. PvP siri ike site na nke mbụ wee nwee egwuregwu zuru ezu ka anyị wee nwee ọ funụ mgbe niile.
1 5 maapụ na ọtụtụ ihe ọchị
2 Atọ egwuregwu egwuregwu atọ na Rogue Agents
3 Onye nke atọ na-agba agba na ọdịnihu
5 maapụ na ọtụtụ ihe ọchị
Rogue Agents bụ a onye na-agba égbè nke atọ nke anyị nwere bọtịnụ nkịtị na anyị nwere n'ime ndị ọzọ dịka PUBG Mobile. Ihe dị iche na nke a bụ na anyị nwere ụzọ ebumnuche nke na-eme ka onye ọrụ anyị nwee nwayọ ma nwekwuo ebumnuche. Na ịpị otu bọtịnụ ahụ ọzọ, anyị na-alaghachi na nkịtị ịkwaga ngwa ngwa.
Ozugbo anyị jidere ya, ndị na-eme ihe ọjọọ na-amalite gosi akwara na ya onwe ya, na ha bụ egwuregwu dị nro nke anyị na-elekwasị anya na njide nke ọkọlọtọ mgbe anyị na-egwu ọnọdụ a. Nke ahụ bụ, enweghị nkwụsị na ịdị mma nke arụmọrụ na-eme ka anyị chefuo ọtụtụ nkwarụ ndị ọzọ anyị na-ahụ na egwuregwu ndị ọzọ.
Ndị ọzọ ukwuu nju nke Ndị na-eme ihe ọchị bụ akụkụ ya kachasị ogige. Anyị nwere a jump na slide nke ọma ejiri ga-enyere anyị aka imeri ọtụtụ ndị iro n'otu oge. A na-ejikọ ọnụ elu ahụ na mgbidi ịrị elu ka anyị wee nwee ike iru nook na crannies ndị ọzọ. A na-arara maapụ ahụ nye ihe ndị ọzọ dị mkpa na ngagharị ahụ.
Atọ egwuregwu egwuregwu atọ na Rogue Agents
Ndị na-egwu egwu na-akpọrọ anyị gaa njide ọkọlọtọ, n'efu maka mmadụ niile yana ndị otu. Ha bụ ndị a maara nke ọma ụdịdị egwuregwu sitere na aha ndị ọzọ na nke ha mara. Ihe na-adọrọ mmasị gbasara ndị na-eme ihe ọjọọ bụ na ị gaghị echere ka egwuregwu ahụ bido mgbe anyị na-eche ka ndị egwuregwu ọzọ sonyere. Anyị nwere ike ịga n’ihu iji kpochapụ ndị egwuregwu ndị ọzọ ịzụ ma si otú ahụ, na mberede, nwee oge egwuregwu.
Banyere ọdịnaya ahụ, site na Ihuenyo mbu anyị nwere ike ịghọta na anyị nwere ike ịkwa ọkwa na ha ga-agbakwunye ọdịnaya ka izu na-aga. Anyị nwere otu nhọrọ gị n'ụlọnga, ka ị na-aga n’ihu, lee anya na nhọrọ ị nwere iji hazie egwuregwu gị.
Nkọwa ọzọ nke ndị na-eme ihe ọjọọ bụ ụfọdụ ndozi maka egwuregwu ahụ. Nwere ike rụọ ọrụ gyroscope iji jiri ọrụ a dịkwa na ndị ọzọ shooter; Onye ọ bụla ji ya, anyị nwere ike ijide gị na ọ na-esiri ha ike igwu egwu n'ụzọ ọzọ.
Onye nke atọ na-agba agba na ọdịnihu
E wezụga ịdị nro ya, anyị na-emekwa gosipụta egwuregwu ọsọ ọsọ ọsọ. Ha bụ nkeji, ma ha na-ngwa ngwa-etinye anyị n'ime erughị ala. O nwere ihe na - eme ka anyị mata mgbe ụfọdụ, mana nke a na - ejide anyị. O doro anya na ọ gaghị ewe oge iji wuo ezigbo ndị egwuregwu.
N'anya o nwere nke ahụ, n'agbanyeghị anyị na-anọnyere otu o si aga. Akụkụ nke abụọ a dị oké mkpa maka ya iji nwee ọdịnihu dị mma, ebe ọ bụ na ọ baghị uru inwe ọmarịcha eserese ma ọ bụrụ na naanị mmadụ ise ga - egwu ya ma emechaa. N'ebe a otu egwuregwu n'azụ mmepe ya amaala etu esi egwu kaadị ya nke ọma. Ugbu a ọ bụrụ na ị nwere ike weta ọdịnaya ọhụrụ dịka PUBG Mobile na-emeỌ bụ ezie na ọ bụghị ọkwa ahụ, anyị nwere egwuregwu nwa oge.
Ndị ọrụ Rogue anyị masịrị na nke a bụ ugbua a otutu. Ugbu a, ọ dị gị mkpa ị toụrị ọ andụ ma nwee obi ụtọ n'egwuregwu ha ngwa ngwa. O ghaghi iju gi anya. Ma eleghị anya, ntakịrị "flashiness" na-efu site na ngwa agha na ihe ntanye, mana ọ ga-abịa. Ha nwere ezigbo ntọala toro.
Ọ nwere ihe ndabere maka nnukwu obodo nke egwuregwu, vitiating a atọ onye shooter na bụ nnọọ ezigbo.
Anya dị mma nke ukwuu
Ike ịrị mgbidi
Ọ naghị ewe oge iji nweta igwe ọrụ gị
Flafọdụ flashiness na ihuenyo ụlọ na ngwá agha ga-adị ndụ
Ndị na-eme ihe egwu: Online TPS Multiplayer Shooter
Developer: Egwuregwu etiti abalị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ndị na-eme ihe na-adịghị mma bụ onye ọhụụ kachasị nke ọma na-agba agba nke atọ
[Ihe nkiri] Otu esi ejikọ Galaxy Note10 + na Windows 10 PC
Mmelite kachasị ọhụrụ maka Galaxy S20 na-agbakwunye mmelite igwefoto ọhụrụ